Ungashandura sei Mhenyu Mapikicha kuGIF neIOS 11 | IPhone nhau
Kubva kuvhurwa kweRarama Mapikicha basa, iro rinotibvumidza kutora mifananidzo inofamba nezwi, sekunge kuti yaive GIF, pasina chaipo, pave paine mafomu mazhinji asvika paApp Store izvo titendere isu kushandura iyi mhando yemifananidzo kuita GIF fomati kukwanisa kugovana navo nekukurumidza kuburikidza nehukama hwehukama uye mameseji ekunyorera. Asi nekusvika kweIOS 11, vhezheni iyo zvakare inotibvumidza kuti isu pakupedzisira tichengete mafaera eGIF fomati pane reel, isu hatichadi kushandisa yechitatu-bato kunyorera, nekuti kubva kuPhoto application pachayo isu tinogona kuishandura ivo kuenda kuGIF.
iOS 11 inotiunzira mashandiro matsva ekufambisa kana kurarama mapikicha atinogona kutora kubva ku iPhone 6s. Iwo matsva mabasa anotibvumidza isu kuti tiwedzere akasiyana mhedzisiro kune iyi mhando yefaira: chiuno, bounce kana kureba kuratidzwa. Iyo chiuno chiitiko chinoshandura iyo mhenyu faira kuita yeGIF faira iyo inodzokorora yadzokorora. Iyo bounce mhedzisiro inotibvumidza isu kubereka iwo mufananidzo kumberi uye kumashure uye iyo refu yekuratidzira mhedzisiro inosanganisa iyo yese mifananidzo inoratidza yakabatana mufananidzo weese mafuremu.
Chinja Rarama Mifananidzo kuGIF isina Yechitatu Bato maApp
Kutanga isu tinofanirwa kuenda kumufananidzo uri mubvunzo wakabatwa pane yedu reel uye tinya pairi.
Ipapo isu tinotsvedza kuti tiwane iyo mhedzisiro iyo iOS 11 inotipa isu nerudzi urwu rwemhedzisiro.
Iye zvino isu tinongofanirwa kusarudza kana isu tichida chiuno chinokatyamadza kana bounce mhedzisiro, nekuti iyo refu yekuratidzira mhedzisiro haitipe isu chinofamba mufananidzo.
Kana tangozvisarudzira, isu tinongofanira kudzvanya kuti tigovane mufananidzo mutsva neshamwari dzedu kana vatinozivana navo. Ichi chifananidzo chinotumirwa muGIF fomati, saka iye anogamuchira haazodi chishandiso cheIOS kana Mac kuti aone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungashandura sei Mhenyu Mapikicha kuGIF neIOS 11
Chii icho Apple garandi inotifukidza pane yedu iPhone?